Emulator Nintendo DS 5 ho an'ny Android | Androidsis
Manomboka amin'ity herinandro vaovao amin'ny volana jolay ity amin-kery isika, ary miaraka amin'ny fihodinananay ho an'ireo mpamaky lalao maro indrindra. ny Nintendo DS dia iray amin'ireo konsole lalao video malaza tanana na portable amin'ny fotoana rehetra. Ny sandany amin'ny maha-kisary eo amin'ny tontolon'ny lalao dia mitovy amin'ny Game Boy tenany sy ny PSP (Play Station Portable). Ny Nintendo DS dia nanana lalao mahatalanjona, ary ankehitriny raha manana smartphone Android ianao dia afaka manohy milalao azy ireo.
Tsy mora ny mitondra ny traikefa amin'ny lalao video amin'ny konsole amin'ny finday avo lenta ary, raha ny tena izy, tsy mitovy ny traikefa, kanefa, ny lanjany an'ohatra dia goavana sy mandaitra, mamela antsika hitadidy ny sasany amin'ireo traikefa mahazatra indrindra manararaotra an'ny finday avo lenta. Nintendo DS emulator ho an'ny Android dia mbola misy akany hararaotina tahaka ny nitranga tamin'ny NES Android emulator fa efa misy safidy mahaliana vitsivitsy izay azonao isafidianana. Raha ny marina, anio ao amin'ny Androidsis dia mitondra safidy fohy ho anao izahay Dimy amin'ireo emulator Nintendo DS tsara indrindra ho an'ny Android izay hitanao izao ao amin'ny Play Store. Hiara-mijery azy ireo ve isika?
2 AseDS (Emulator ho an'ny NDS)
Amin'ity rindrambaiko natombokay ity dia ho gaga ianao satria "RetroArch" a rehetra ao amin'ny iray emulatorIzany hoe, manohana rafitra lalao isan-karazany izy, anisan'izany ny Nintendo DS, Game Boy, SNES, Game Boy Advance ary ireo rafitra maro tsy Nintendo, mba hahafahanao mankafy bebe kokoa. Mazava ho azy, raha te hankafy azy io ianao dia tsy maintsy mampidina misaraka ny rafitra tsirairay ao anaty ny fampiharana noho izany, Azafady alao aloha ny rafitra Nintendo DS, ary avy eo afaka milalao tsy miato ianao. Izy io dia manana ny fiasa fototra rehetra ary na dia tsy mora ampiasaina aza izy io, maimaimpoana tanteraka izany, tsy misy fividianana na dokam-barotra amin'ny fampiharana. Ho fanampin'izay dia ao anatin'ny dingan-dàlana ho an'ny fampandrosoana izy io ka mbola mampanantena zavatra betsaka lavitra.
AseDS (Emulator ho an'ny NDS)
AseDS dia iray amin'ireo emulator Nintendo DS vaovao ho an'ny Android. Manolotra fiasa be dia be toy ny kaody hosoka, bokotra fanao am-bika, safidy fampisehoana efijery, ary ny fiovana sasany momba ny fampisehoana hahamora ny lalao sns. Ny ankamaroan'ny ROM dia miasa tsy misy olana, na dia misy bibikely fahita aza amin'ireo emulator ireo. Etsy ankilany, toy ny teo aloha misintona maimaim-poana tsy misy fividianana fampiharana, na dia eny aza amin'ny doka mety hanelingelina.
Tsy toy ny teo aloha, Nds4droid dia iray amin'ireo emulator Nintendo DS taloha indrindra ho an'ny Android, loharano misokatra ary tsy nahazo fanavaozana nandritra ny fotoana ela. Izany dia mahatonga azy hanana bibikely, toy ny somary miadana kokoa noho ny emulator hafa, fa amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara izy io ary maimaim-poana tanteraka nefa tsy misy fividianana anaty fampiharana ary tsy misy dokam-barotra, noho izany dia mety ho safidy tsara hanombohana izany. Ity avy amin'ny emulator.
Avy amin'ny safidy maimaim-poana dia mandeha amin'ny safidy karama isika. "DraStic DS Emulator" dia manana vidiny 4,99 euro ao amin'ny Play Store kanefa, ho setrin'izany, maro ireo mamaritra azy ho angamba ny tsara indrindra amin'ny emulator Nintendo DS ho an'ny Android dieny izao. Ireo izay nanandrana dia manome toky fa mahavita manatanteraka saika ny lalao rehetra navoaka izy. Ho fanampin'izany, miaraka amina andian-dahatsoratra mahaliana izy io, manomboka amin'ny safidy hanamboarana ny firafitry ny efijery, hatrany amin'ny safidy ampanjifaina ho an'ny mpanara-maso, fanohanana ireo mpanara-maso ivelany, mandroso haingana, tohana ho an'ny Google Drive ... Ary raha manana finday avo lenta avo lenta, azonao atao koa ny mankafy sary vitsivitsy nohatsaraina.
Hofaranay amin'ny NDS Boy, iray amin'ireo emulator Nintendo DS farany indrindra. Ny lafy ratsy dia izay mifanaraka amin'ny fitaovana avo lenta fotsiny izy io raha tsy izany dia tsy handeha tsara. Manana ny endri-javatra ilaina amin'ny emulator hafa ianao, anisan'izany ny fanaraha-maso namboarina, ny fanohanana ny ankamaroan'ny lalao NDS ary maimaim-poana ihany koa izany, miaraka amin'ny dokam-barotra nefa tsy misy fividianana ao anaty app.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Emulator Nintendo DS 5 ho an'ny Android
Omano ny findainao smartphone ho an'ny fialan-tsasatra miala sasatra